Iphaneli yemagniziyam yemagniziyam yesikhokelo inomphezulu ogudileyo kwaye mhle, ubushushu obufanelekileyo bokugquma, ukufudumeza ubushushu, ulondolozo lobushushu, ukumelana nenyikima kunye nokumelana nomlilo.
Iimpawu zemveliso zepaneli eyenziwe ngegumbi ecocekileyo eyenziwe ngegumbi
1. Uluhlu olubanzi lwezicelo: Iimveliso zisetyenziselwa ukufakwa kwegumbi elicocekileyo, indawo evaliweyo kunye nemveliso ecocekileyo, izityalo zeshishini, indawo yokugcina izinto, ukubanda okubandayo, iipaneli zokupholisa umoya.
2. Ukwahluka kwemveliso: Iimveliso zibandakanya umphezulu wentsimbi werock engaphezulu Iphaneli, i-aluminium yentsimbi yentsimbi (iphepha) isiseko sobusi Iphaneli, Isiseko sentsimbi kumphezulu wegypsum Iphaneli, Isinyithi umphezulu gypsum rock uboya core Iphaneli, umphezulu wentsimbi we-gypsum layer extrusion uqinise umongo womqhaphu Iphaneli . Sinako ukuvelisa izinto ezingundoqo ezingundoqo kunye neenkcukacha ezizodwa iipleyiti ngokweemfuno zabathengi.
3. Iipropathi ezilungileyo zomzimba kunye neekhemikhali: Umphezulu wentsimbi yemveliso yipolyester yokubhaka ukutyabeka okanye ukutyabeka kwe-zinc, ipleyiti yentsimbi engenasici, ngoko ke ukumelana nokubola kulunge ngakumbi; izinto zokugcwaliswa kwemveliso zizinto zonke ezodidi oluDangayo ezingayi kunyibilika xa zitshisiwe. Iidriphu zokuhla kobushushu obuphezulu okwangoku zizinto zokuhombisa zokwakha ezinomlilo ophezuluIphaneli, ngamandla aphezulu, ukuxhathisa ifuthe kunye nokumelana nenyikima elungileyo.
4.Ukwakha okufanelekileyo kunye nofakelo: Umatshini wokubumba obandayo ozenzekelayo odityaniswe nemveliso yezandla unokuveliswa ngokweemfuno zeprojekthi yedemander ngobude obubekiweyo nobubanzi, kunye nokudityaniswa okuhlanganisiweyo, okunganciphisi kuphela iindleko zesakhiwo ubunjineli obuyisiseko kunye nolwakhiwo, kodwa bunokuchithwa amaxesha amaninzi Ufakelo, ulwakhiwo kunye nofakelo zilungile, kwaye izibonelelo ezibanzi zibaluleke kakhulu. Ibhodi yeglasi yemagniziyam yeZhongkong yamkela amacwecwe esinyithi kumacala omabini, kwaye kusetyenziswa isakhelo esitsala ukubanda kuyo, kwaye ibhodi yeglasi yemagniziyam iglu ngaphakathi. Imveliso inobuso obugudileyo nobuhle, ukufakwa kwesandi esihle, ukufudumeza ubushushu, ulondolozo lobushushu, ukumelana nenyikima, ukumelana nomlilo, ubungakanani obuchanekileyo bejiyometri, ufakelo olufanelekileyo, kunye nokonga ixesha kunye nokugcina abasebenzi.
Egqithileyo Iphaneli yegumbi elicocekileyo elenziwe ngezandla igumbi elicocekileyo
Okulandelayo: Iphaneli yegumbi elicocekileyo elenziwe ngezandla
Ucoceko loyilo lwegumbi
IPaneli yeGumbi elicocekileyo
Ukucoca iCandelo loMoya oMtsha, Igumbi elicocekileyo, Ifestile yokuGqibela yokuCoca igumbi, Igumbi lokucoca umoya ococekileyo, Ifestile yegumbi elicocekileyo, Inkqubo yaManzi aBandayo,